Friday, 24th November 2017 3:24pm.
ကမ္မဌာန်းတရားအားထုတ်ခြင်းကြောင့် လူဦးနှောက် အရွယ်အစားကြီးလာ နိုင်သည်။ - by ကောင်းထက်ညွန့် - Kaung Htat Nyunt Short, Simple and Easy to Remember Dhamma Note, DhammaWeb ကမ္မဌာန်းတရားအားထုတ်ခြင်းကြောင့် လူဦးနှောက် အရွယ်အစားကြီးလာ နိုင်သည်။ by ကောင်းထက်ညွန့်
ကမ္မဌာန်းတရားအားထုတ်ခြင်းကြောင့် လူဦးနှောက် အရွယ်အစားကြီးလာ နိုင်သည်။
Sara Lazar (center) talks to research assistant Michael Treadway and technologist Shruthi Chakrapami about the results of experiments showing that meditation can increase brain size. (Staff photo Kris Snibbe/Harvard News Office)
တရားအားထုတ်သူတို့ ၏ ဦးနှောက်သည် တရားအားမထုတ် သူတို့၏ ဦးနှောက်ထက် ပိုမိုကြီးထွားဖွံဖြိုးသည်။
တရားအားထုတ်ခြင်းသည် လူ့ဦးနှောက်၏ အရွယ်အစား၊တည်ဆောက်ပုံကိုပြောင်းလဲနိုင်ကြောင်း ဟားဗက်တက္ကသိုလ်၊ယေးတက္ကသိုလ်နှင့်မန်ဆာချူးဆက်တက္ကသိုလ်သုတေသနများမှဖော်ထုတ် တွေ့ ရှိခဲ့သည်။
ကျမတို့၏လေ့လာတွေ့ ရှိချက်များအရ တရားအားထုတ်ခြင်းဖြင့်ဦးနှောက်၏ ခံစားမှု့ဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်များ၊စဉ်းစားတွေးခေါ်မှု့ဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်များကိုဖြစ်စေသောဧရိယာနေရာတို့်၌ တိုးတက်ဖွံဖြိုးလာနိုင်ကြောင်းဟားဗက်ဆေးတက္ကသိုလ်၏ သုတေသနအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်ဆာရာလာဇာကပြောခဲ့သည်။ သူမ၏တွေ့ ရှိချက်များသည် တခြားသောသက်သေပြချက်များနှင့်လည်းကိုက်ညီနေသည်။ တူရိယာပညာရှင်၏ဦးနှောက်သည် တေးဂီတဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်များဆောင်ရွက်သောဧရိယာနေရာ၌ပိုမိုကြီးထွားလေ့ရှိသည်။ထပ်ခါထပ်ခါလေ့ကျင့်ခြင်းဖြင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသောလူ့ တစ်ယောက်၏ဦးနှောက်တည်ဆောက်ပုံကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ပုံမှန်တရားထိုင်လေ့ရှိသောယောဂီအယောက်၂၀တို့၏ဦးနှောက်စကန်မှတ်တမ်း(Brain Scan) နှင့် လုံးဝတရားအားမထုတ်ဘူးသောသာမာန်လူ ၁၅ယောက်၏ ဦးနှောက်စကန်မှတ်တမ်း(Brain Scan)များကိုနှိုင်းယှဉ်လေ့လာခဲ့သည်။ ယောဂီလေးဦးသည်တရားသမားများ(သို့)ယောဂလေ့ကျင့်သူများဖြစ်သည်။ ထိုအယောက်၂၀အားလုံးမှာတောရဆောက်တည်ပြီးကမ္မဌာန်းတရားပွားများနေသောရဟန်းတော်များမဟုတ်ပါ။ ကျန်၁၆ယောက်မှာရှေ့နေ၊သတင်းသမားနှင့်ကျန်းမားရေးဝန်ထမ်းများဖြစ်ကြသည်။အစမ်းသပ်ခံသူများအားလုံးသည်လူဖြူလူမျိုးများဖြစ်ကြသည်။ ဦးနှောက်စကန်မှတ်တမ်း(Brain Scan)များကိုရယူနေစဉ်ယောဂီများအားလုံးမှာတရားအားထုတ်နေကြပြီး တရားမထိုင်ဖူးသည်သာမာန်လူများအားလုံးမှာမိမိတို့ နှစ်သက်ရာကိုတွေးတောနေခဲ့ကြသည်။
ခံစားမူဆိုင်ရာအတွေ့ အကြုံ၏အတွေးများ(thoughts) ထက် ခံစားမူဆိုင်ရာအတွေ့ အကြုံများကိုအာရုံပြုခြင်း(attention) လေ့လာရန်ရည်ရွယ်ခဲ့သည်ဟုလာဇာကရှင်းပြသည်။ ဥပမာ အသံတစ်သံကြားတာနှင့်တပြိုင်နက် (အသံအကြောင်းမစဉ်းစားခင်) အရင်နားထောင်တတ်ကြသည်။ ချော်လဲတာနှင့်တပြိုင်နက်နာကျင်တာကိုချက်ချင်းသတိပြုမိပါသည်။ ကျွမ်းကျင်စွာတရားအားထုတ်နိုင်သည့်ယောဂီတစ်ယောက်သည်တွေးတောစိတ်ကူးယဉ်နေလေ့မရှိပါ။
အစမ်းသပ်ခံယောဂီများသည် နေ့ စဉ် မိနစ်၄၀ခန့်တရားထိုင်လေ့ရှိသည်။ တစ်နှစ်ကျော်တရားအားထုတ်ထားယောဂီမှ ၁၀နှစ်ကျော်အားထုတ်ဖူးသော ယောဂီများပါဝင်ကြသည်။ ကမ္မဌာန်းအာရုံ၌ စိတ်၏နှစ်မြုတ်ထားနိုင်စွမ်းကိုအသက်ရူနှုန်းမည်မျှနှေးသွားသည်ဆိုသည်နှင့်တိုင်းတာပါသည်။ ကမ္မဌာန်းအာရုံ၌ စိတ်ကိုစူးစိုက်နစ်ထားနိုင်ကြောင်းကို ယောဂီတို့၏ဦးနှောက်၌ကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမူတွေကသက်သေပြခဲ့သည်။ ဦးနှောက်၏တည်ဆောက်ပုံ(Brain Structure )ပြောင်းလဲမူသည်တရားဘာဝနာအားထုတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သည့်၁၀နှစ်ကျော်ကတည်းက လာဇာ စတင် တရားအားထုတ်ခဲ့သည်။တပတ်လျှင်သုံးခါတရားအားထုတ်ဖြစ်သည်။ အစကတော့ဘာမျှသိပ်နားမလည်ခဲ့ပါ။စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေသိသိသာသာလျှော့နည်းလာတယ်၊ပိုမိုရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့စိတ်ကူးကောင်းတွေရလာသည်၊ ခက်ခဲတဲ့အကြပ်အတည်းတွေကြားမှာအာရုံစူးစိုက်နှိုင်စွမ်းမြင့်မားလာတယ်လိုလာဇာကရှင်းပြခဲ့သည်။
ဝိပဿနာဘာဝနာကိုအချိန်မရွေး၊နေရာမရွေးအားထုတ်နိုင်ပါသည်။ အားထုတ်နေကြ ယောဂီတစ်ယောက်သည် ဗရမ်းဗတာ အတွေးတွေ ခေါင်းထဲကိုဝင်လာပြီဆိုတာနှင့် တစ်ပြိုင်နက် ချက်ချင်း သတိထားမိပါသည်။
အရေးကြီးတဲ့ deadline တွေ လွဲချော်သွားရတေ့ာမည့်အခါ၊ အလုပ်ရှင်(သို့)မန်နေဂျာက မိမိ၏လုပ်ဆောင်မူတွေကို မကြိုက်သည့်အခါတွေမှာ လူတွေက အလွန်စိုးရိမ်ပူပန်တတ်ကြသည်။
အဲဒီအချိန်မှာလူတွေဟာကိုယ်ကိုကိုယ် စိုးရိမ်ပူပန်မူတွေနှင့် ခြောက်ခြားရူးသွတ်စေပြီး မိမိရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေ ကျဆင်းသွားစေသည်။ အဲဒီ စိုးရိမ်ပူပန်မူတွေအစား လက်ရှိပစ္စုပန်မှာအခုဘာလုပ်သင့်သလဲ၊ ဘာဖြစ်နေသလဲ ဆိုတာတွေအာရုံစိုက်မိရင် ပူပန်မှု ဖြေပျောက်သွားတတ်သည်။ ထိုအခိုက်၌ ရှောရှောရုရူ အလုပ်တြွေ ပီးသွားတတ်ကြောင်းကိုလည်း လာဇာက ပြောခဲ့သည်။
ဦးနှောက်ကြီးထွားလာတဲ့ ပမာဏက တစ်လက်မရဲ့ တစ်ထောင်ပုံ (၄)ပုံမှ (၈)ပုံအတွင်း ရှိပါတယ်။ တစ်လက်မ၏တစ်ထောင်ပုံ၎ပုံမှ၈ပုံခန့်အထိကြီးထွားလာသည့်ဦးနှောက်ပမာဏသည်ယောဂီတစ်ယောက်ရဲ့တသက်တာအတွင်းတရားထိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်စုစုပေါင်းနှင့်တိုက်ရိုက်အချိုးကျပါသည်ဟုလာဇာကပြောခဲ့သည်။ထိုပမာဏကို ကမ္မဌာန်တးရား အပြင်းအထန်အားထုတ်စဉ်ကရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၁၀ရက်၊၁ပါတ်အားထုတ်ပြီးယောဂီလိုအမည်တပ်ခံရရုံသက်သက်နှင့်တော့ဦးနှောက်ကကြီးထွားလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။
အလွန်သေးငယ်သည့် ပမာဏပဲကြီးထွားပါစေ။ ထိုကြီးထွားခြင်းက ကမ္မဌာန်း တရားအားထုတ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထိုကြီးထွားခြင်းကြောင့်ဘယ်လိုကျန်းမားရေးတွေတိုးတက်ကောင်းမွန်လာတယ်၊ အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းတွေကို ဘယ်လိုနှေးကွေးစေတယ်ဆိုတဲ့ လေ့လာမှုတွေကို ဦးဆောင်ပါလိမ့်ဦးမည်။
ဦးနှောက်၏ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှု ပိုင်းဆိုင်ရာဧရိယာနေရာနှင့် ခံစားမှု ပိုင်းဆိုင်ရာဧရိယာနေရာတို့ အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်ချက်တွေ ဘယ်လိုကောင်းမွန်လာသလဲ...စတဲ့အခြေခံမေးခွန်းတွေကိုများစွာကိုအဖြေရှာရန်လိုအပ်ပါသည်။
မန်ဆာချူးဆက်အထွေထွေဆေးရုံကြီး၌ ထိုမေးခွန်းများစွာတို့ကိုဖြေဆိုရန်အတွက် အလွန်ကျယ်ပြန့်တဲ့လေ့လာမူများကိုပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ခဲ့ပါသည်။
ရရှိထားတဲ့ရလာဒ်တွေကအရမ်းကိုအားရကျေနပ်စရာကောင်းပါတယ်။ ပိုများတဲ့ယောဂီတွေနှင့်အကြိမ်ပေါင်းများစွာထပ်မံစမ်းသပ်ရန် လိုအပ်ပါတယ်။ ယောဂီတစ်ယောက် တရားစတင် အားမထုတ် ခင်က ဦးနှောက်နှင့် ကျွမ်းကျင်စွာ တရားအားထုတ်နိုင်တဲ့ဦးနှောက်ကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာရန် အခုကျမတို့အဖွဲ့ စီစဉ်နေပါပြီဟု လာဇာကပြောကြားခဲ့သည်။
(ကမ္မဌာန်းတရားအားထုတ်ခြင်းကြောင့် လူဦးနှောက် အရွယ်အစားကြီးလာ နိုင်သည်။) by Kaung Htat Nyunt (ကောင်းထက်ညွန့်)